बैकका सहायक अधिकृत अख्तियार फन्दामा
काठमाडौँ । अख्तियारले मध्यपश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय नेपालगन्जका सहायक अधिकृत पुष्प दुराविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी नियुक्ति तथा बढुवा लिएको आरोपमा आयोगले दुराविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो । सेवा प्रवेश तथा बढुवाका लागि दुराले डा. राममनोहर लोहिया अवध विश्पविद्यालय फैजावाद (उ.प्र.) अन्तर्गतको नेरुजी कलेज बाराबंकी भारतबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको आयोगको ठहर छ ।
सो अभियोगमा आयोगले दुरामाथि सजाय मागदाबीसहितको विशेष अदालतमाक मुद्दा दर्ता गरेको हो ।